» Maamulka Sh/dhexe oo faah faahin ka bixiyay qaraxyo ka dhacay Jowhar Boga Hore SOOMAALIYA
Maamulka Sh/dhexe oo faah faahin ka bixiyay qaraxyo ka dhacay Jowhar
December 12, 2012 - Written by Muqdisho - Edited byMuqdisho ShareMaamulka gobolka Sh/dhexe ee dowladda Soomaaliya ayaa faah faahin ka bixiyay qaraxyo ka dhacay Magaalada Jowhar ee Xarunta gobolkaasi.
Afhayeenka Maamulka gobolka Sh/dhexe oo la hadalay qaar ka mid ah warbaahinta ka howlgasha Magaalada Muqdisho ayaa u sheegay in qaraxyadii xalay ka dhacay Magaalada Jowhar aysan wax qasaaro ah ka soo gaarin ciidmada dowladda ee halkaasi ku sugan.
Afhayeenka ayaa tilmaamay in qaraxu uu ka dhacay sida uu hadalka u dhigay goob ay Al Shabaab markii ay Magaaladaasi heystayn dhaliyarada timaha uga jarijireen taasi oo xilliga qaraxu uu ka dhacyay aysan Ciidamad dowladdu joogin.
Daa’uud Afhayeenka Maamulka gobolka Sh/dhexe ayaa xusay in Magaalada Al Shabaab ay qaraxyo ka buuxiyeen si ay u waxyeeleeyaan Shacabka ku nool magaaladaasi laakiin waxa uu sheegay in feejignaan dheeri ah muujinayaan.
Saacadihii koobnaa ee ay Ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM gacanta ku hayeen Magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Sh/dhexe waxaa ka dhacay qaraxyo iyo falal kale iyadoo Ciidamada Nabad Sugida ay howgallo ka sameeyeen Magaalada.